नव विवाहित दम्पतीमा किन हुन्छ डर ? | latestnepali.com
सुधिर र रेश्मा अभिनित रचना रिमालको ‘पर्नु पिर पर्‍यो’ सार्वजनिक ( भिडियो )... ६ घण्टा अगाडि
नव विवाहित दम्पतीमा किन हुन्छ डर ?
काठमाडौ । विवाह भनेको एकअर्कामा सँगै मर्ने र सँगै बाच्ने कसम खाएर जीन्दगी भरको लागी बाँधिएको लगन गाँठो हो । तर गााठोलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरुले फुकाउन र टुक्राउन खोज्छ । किनभने एउटै परिवारको दाजुभाईमा त झगडा हुन्छ । झन् अकै वातावरण तथा परिवारमा हुर्केकी युवतीसँग कसरी कुरा मिल्छ । त्यसैले विवाह गरेपछि विवाहपूर्व जस्तो आफ्नै ढङगले डुल्न ,खान पाइदैन् । किनभने विवाहपछि एकअर्कालाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने तपाईमा जिम्मेवारी थपिएको हुन्छ । तर नव विवाहित दम्पतीलाई सुरुमा परिवारमा घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ ।त्यसमा के के मा डर हुन्छ ? जान्नुस् ।
-नव दम्पतीमा आफुले गरिरहेका काममा ,बोली ,व्यवहारमा गल्ती हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । किनभने नयाँ घर , नयाँ परिवार , नयाँ मान्छेसँग घुलमिल हुन समय लाग्छ । त्यसैले नव दम्पतीमा यस्तो प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
-नव दम्पतीमा मैले विवाह गर्न हतार गरे कि , अलि उमेर पुगेपछि गरेको भए नि हुन्थ्यो भन्ने डर हुन्छ । एउटा विश्वप्रशिद्ध भनाई छ, हतारमा विवाह गर्छन् र फुर्सदमा पछुताउँछन् ।यो पनि स्वभाविक नै हो ।
-अर्को सही जीवनसाथी छनौट गरिएन कि भन्ने डर हुन्छ । किनभने बाहिरी बोलीचाली र व्यवहारलाई मात्र हेरेर विवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले विवाहपछि खराब बानी व्यवहारको भयो भन्ने के गर्ने ?कही जाडरक्सी मात्र खाएर हिड्ने हो कि ?भन्ने डर हुन्छ ।
-र विवाहपछि कुरा नमिलेर सम्बन्ध विच्छेद हुने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।
किन युवाहरु आफुभन्दा बढी उमेरकी युवती मन पराउँछन् ? यस्तो छ कारण
अलौकिक शक्तिकी देवी पाथीभरा माताको उत्पति कसरि भयो ?